I-Rajthani Hotel Double Room - I-Airbnb
I-Rajthani Hotel Double Room
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguRajthanihotel
Ihotele iRajthani isembindini weSurat Thani. Ngendawo efanelekileyo kwesi sithili seshishini sesixeko, phakathi kweetempile, ukuthenga, iimarike zokutya esitratweni, kufutshane neBhasi Terminal! Kulula kakhulu ukuhamba. Zininzi iindawo onokuya kuzo kwiziqithi zeGulf of Thailand neAndaman.
Ihotele iRajthani iseSuratthani, uhamba nje imizuzu eyi-2 ukusuka kwimarike yasebusuku. Amagumbi anomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu akwenza ukwazi ukubona isixeko uze ube nedesika neWiFi yasimahla.
Kwihotele igumbi ngalinye linekhabhathi, iTV enezikrini eziyisicaba negumbi lokuhlambela labucala.
Ihotele iRajthani iseSuratthani, uhamba nje imizuzu eyi-2 ukusuka kwimarike yasebusuku. Amagumbi ano…
4.50 (iingxelo zokuhlola 4)
Ihotele iRajthani isembindini weSurat Thani. Kwindawo efanelekileyo kwisithili seshishini sesixeko, phakathi kweetempile, ukuthenga kunye nemarike yasebusuku, Ihotele ikwindawo ekufutshane neBhasi Terminal.
Umbuki zindwendwe ngu- Rajthanihotel
Iinkonzo zokwamkela iindwendwe kwiRajthani Hotel zisebenza iiyure ezingama-24 ngosuku.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tambon Talat